Ny isa amin'ny teny sy ny fiantraikan'ny halavan'ny atiny amin'ny SEO | Martech Zone
Nandritra ny fotoana lava be dia tsy nanandrana nifampidinika tamin'ny fanombohana nahazo famatsiam-bola sy mpanjifa orinasa lehibe aho satria fantatro fa afaka mamindra ny fanjaitra fiovana amin'ny orinasa manana loharano sy fotoana ahazoana mizara ny tsena aho. Tamin'ny taon-dasa, sambany aho no nanapa-kevitra ny hampihatra ireo teknika nitovizako tamin'ireo orinasa manana orinasa kely sy kely… ary nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fanatsarana ny laharam-pikarohana sy ny fiovam-pon'izy ireo.
Ny fototry ny paikady dia ny mandatsaka ny tsipika famokarana atiny ary, kosa, ny fampivelarana a tranomboky atiny. Ny fifantohanay dia tsy ny fizotran'ny fotoana na ny fahita matetika amin'ny lahatsoratray izay vokarinay ho an'ny mpanjifa, ny fikarohana ireo lohahevitra mahaliana azy ireo ary mifandraika amin'ny orinasa… ary ny fananganana ny fahefan'ny tenany sy ny orinasa ary ny fitokisany miaraka amin'ireo mpanjifa ho avy. Ny ivon'ny fifantohana dia manala ny orinasa ary, mametraka ny mpanjifa na ny fandraharahana ho eo afovoan'ny atiny.
Ohatra, manana namana tsara manana fananana matanjaka sy mora vidy aho sehatra marketing marketing. Miaraka amin'ireo fiasa toa ny fitsangatsanganana finday, fandefasan-kafatra an-tsoratra, CRM, taratasim-mailaka, ary automatisation marketing… mety hanoratra momba ireo endri-javatra sy tombontsoa ireo isan'andro izy ireo. Izany dia hametraka ny rafitr'izy ireo ho fototry ny paikadin'ny votoatiny.
Saingy tsy tokony hitarika laharana na fanovana izany.
Nahoana? Satria afaka mahita ny tranonkalany ny mpitsidika, mamaky ny momba ny endrik'izy ireo, ary misoratra anarana amin'ny kaonty fanandramana maimaim-poana. Torohevitra sy fika an-jatony maro no mety mahazo fizarana sasany, saingy tsy hiova izy ireo.
User Focus mifanohitra amin'ny Algorithm Focus
kosa, Agent saosy miasa ao amin'ny gazety, bilaogy ary podcast izay mifantoka amin'ny fanamby sy tombontsoa azo avy amin'ny fahombiazana trano tena trano. Nisy ny fifanakalozan-kevitra momba ny olana ara-dalàna, fampindramam-bola VA, famindran-toerana amin'ny asa aman-draharaha, hetra amin'ny fanjakana sy federaly, toekarena isam-paritra, fampisehoana an-trano, fivadihan-trano, sns. izany dia ny hanomezana fahaizana avy amin'ny loharanon-karena amin'ny indostria izay hanampy ny vinavinany sy ny mpanjifany hivarotra amin'ny fomba mahomby kokoa sy hampitombo ny orinasany.
Fa tsy mora izany. Voalohany, tsy maintsy mikaroka izy ireo hoe inona ny andro iray amin'ny fiainan'ny agents sy ny olana rehetra atrehin'izy ireo. Avy eo, tsy maintsy manangana ny fahaizany izy ireo na mampiditra manam-pahaizana hafa hanampiana ny vinavinany sy ny mpanjifany. Ary tsy maintsy manao izany rehetra izany izy ireo raha mbola manohy mifaninana amin'ny sehatra misy azy ireo.
Na izany aza, ny fiantraikany dia lasa loharanon-karena lehibe eo amin'ny sehatry ny indostria izy ireo ary manangana fifandraisana maharitra miaraka amin'ny mpihaino. Ho an'ny vinavina, lasa loharanom-pahalalana takiana amin'izy ireo izy ireo noho ny atiny kalitao. Ho an'ny mpanjifa dia manampy azy ireo hahomby sy ho sambatra kokoa amin'ny asany izy ireo.
Ny kalitaon'ny atiny sy ny halavan'ny atiny
Angataho mpanoratra maro momba ny teny nalaina am-pikarohana sy hanoratra lahatsoratra, ary mahazatra ny valiny:
Inona no atao hoe isa sy fe-potoana farany?
Mamono ahy izany valiny izany. Ity no fanontaniana tokony hapetraka:
Iza ny mpanatrika ary inona no tanjona?
Amin'izay fotoana izay, ny mpanoratra dia afaka manao fikarohana savaranonando momba ny fifaninanana, ny enti-manana ary ny persona an'ny mpihaino kendrena ary hiverina miaraka amin'ny vinavina momba ny fahavitan'ny lahatsoratra sy ny vidiny. Tsy miraharaha ny halavan'ny atiny aho; Miahy aho fahafenoana atiny. Raha mamoaka lahatsoratra momba ny lohahevitra iray aho dia te hamaly ny fanontaniana rehetra mifandraika amin'izany atiny izany. Te hanome zava-misy sy tarehimarika vitsivitsy aho. Te hampiditra sary, tabilao, sary ary horonan-tsary aho. Tiako ho lahatsoratra ratsy indrindra amin'ny Internet ity lahatsoratra ity.
Ary rehefa mamoaka lahatsoratra feno sy fikarohana tsara izay tsara kokoa noho ny loharano hafa rehetra isika dia mazava ho azy fa lava kokoa ny halavan'ny lahatsoratra. Raha lazaina amin'ny fomba hafa:
Na dia mifandraika amin'ny laharan'ny motera fikarohana sy ny fiovam-po aza ny halavan'ny atiny, dia tsy izany antony filaharana sy fiovam-po tsara kokoa. Ny fanatsarana ny kalitaon'ny atiny dia miteraka filaharana sy fiovam-po tsara kokoa. Ary ny atiny kalitao dia mifandraika amin'ny halavan'ny atiny.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, andao hojerentsika ny fifandraisan (tsy anton'izany) ny halavan'ny atiny, ny fanatsarana ny motera fikarohana ary ny fiovam-po amin'ity sary antsipirihany ity avy amin'ny Capsicum Mediaworks, Ny fiantraikan'ny halavan'ny atiny amin'ny SEO sy ny fiovam-po. Atiny avo lenta izay misy a isa isa kokoa milahatra tsara kokoa, zaraina bebe kokoa, milahatra lava kokoa, miditra lalindalina kokoa, mampitombo ny fiovam-po, mitarika fitarihana ary mampihena ny tahan'ny fihenam-bidy.
Ny famaranana dia manakiana; kalitao atiny lava endrika fampiasam-bola tsara kokoa.
Tags: infographic atinyhalavan'ny atinykalitaon'ny atinyfilaharana atinyfikarohana atinyisa amin'ny teny afa-pofiovam-ponyHafirianafiry ny tenyny fomba filalaovana tsaratsara kokoaSary torohayendrika lava endrikakalitaoambonyfikarohanaSEOny fomba fiasan'nyvoatanisa ny teny